कर्णालीमा भयावह कोरोना, के गर्दैछ सरकार ?
जनतालाई महमारीको पीर, नेतालाई कुर्सीको !
२० बैशाख, काठमाडौं : काठमाडौँ : कर्णाली प्रदेश कोरोना भाइरसले भयावह रुप लिँदै गएको छ । कर्णालीका १० जिल्लामा औपचारिक रुपमा नै प्रवेश गरेको कोरोनाले चार जिल्ला पूर्ण रुपमा प्रभावित पारेको छ । राजधानी सुर्खेतसहित दैलेख, रुकुम पश्चिम र जुम्लामा पाँच सय भन्दा बढी कोरोना संक्रमित छन् ।
सुर्खेतमा संक्रमितको संख्या चार हजार ९९ छ । जहाँ पुरुष २७१३ जना संक्रमित छन् । महिला १३८६ जना छन् । राजधानी सुर्खेतमा संक्रमितको अवस्था भयावह भएपछि नागरिक त्रसित छन् । सोमबार मात्रै सुर्खेतमा चार जना संक्रमितको ज्यान गएको छ ।
सुर्खेतपछि कोरोनाले भयावह पारेको जिल्ला दैलेख हो । जहाँ १७९२ संक्रमित छन । गएको वर्ष दैलेख कोरोनाले निकै भयावह बनेको थियो । दैलेखपछि सल्यान र रुकुम पश्चिममा पनि कोरोना संक्रमितको सख्या बढ्दो छ ।
अहिलेसम्म पाँच जिल्लाको अवस्था हेर्दा सबै ठाउँमा लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था छ । सुर्खेत बाहेक अरु ठाउँमा लकडाउन छैन् । विस्तारै अरु जिल्लामा पनि लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । नयाँ भेरियन्ट सबै ठाउँमा नफैलिएकाले सुरक्षामा केही लापरवाही भएको होला । तर अवस्था भने पहिले र अहिलेमा फरक छ ।
पहिलो कोरोनाको लहरमा त्यति गाह्रो थिएन । तर अहिले संक्रमितको अवस्था जटिल छ । अहिले अस्पताल भर्ना भएका धेरै सक्रमितलाई अक्सिजन चाहिएको छं । अक्सिजन नपाएर धेरै संक्रमितको मृत्यु भइरहेको छ ।
तर यस्तो बेला पनि कर्णाली प्रदेश सरकार भने संक्रमण नियन्त्रणतर्फ अग्रसर हुन सकेको छैन् । कोरोना भयावह भइरहेका बेला कर्णाली सरकार भने कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने धाउन्नमा छ ।
प्रकाशित मिति: सोमवार, बैशाख २०, २०७८, ०९:४९:५०
संकटमा सामाजिक विकास मन्त्रालय नेतृत्वविहीन मन्त्रीका लागि माओवादी र कांग्रेसको हानथाप ?
सामाजिक रुपमा पनि जस पाउने मन्त्रालय भएकाले यसमा कांग्रेस र माओवादी नेताहरुको हानथाप बढेको हो । तर माओवादीको तुलनामा कांग्रेसको दाबी ठूलो छ । तर कहिले कर्णालीमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले मन्त्री पाउने ? कुन नेता मन्त्री बन्ने ? उसले कस्तो भिजन ल्याउने ? अनि कसरी कोरोना नियन्त्रण गर्ने ? सबै अन्यौल छ । पुरा पढ्नुहोस्